Ukuzamazama komhlaba kuguqula izakhiwo ezinwebekayo zoqweqwe loMhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuzamazama komhlaba kuguqula izinto ezinwebeka koqweqwe lomhlaba
Sonke siyazi, kungaba ngokufunda ezinye izindaba, ngokuzibona ezindabeni noma ngokuphila ngazo, ukuthi ukuzamazama komhlaba kuyakwazi ukucekela phansi imigwaqo, izakhiwo nazo zonke izinhlobo zokwakhiwa. Kepha, ngaphezu kwalokho, bangaguqula ukwakheka kwezwe ... noma imbulunga uqobo lwayo.
Futhi ngabe lokho kuhlolwa kwakamuva kukhombisa lokho ukuzamazama komhlaba kushintsha izinto ezinwebeka koqweqwe lomhlaba. Kuyamangalisa, akunjalo?
Kepha okokuqala, ake sibheke ukuthi uqweqwe lomhlaba luyini.
Uqweqwe Lomhlaba ungqimba lwedwala olungaphandle lweplanethi. Ngempela kulungile kakhulu, ubukhulu obungaba ngu-5km phansi olwandle, kuze kufike ku-70km ezindaweni ezinezintaba. Uqweqwe njengoba silwazi namuhla cishe luzungeze iminyaka eyizigidi eziyi-1700-1900. I-oceanic, ehlanganisa ama-78% womhlaba, nezwekazi ziyehluka.
Ukuzamazama komhlaba kwakheka kanjani
Njengoba sazi, iplanethi, uma sikhuluma ngokwendawo, ibukeka njengephazili ngenxa yamapuleti e-tectonic ahlukile (abizwa nangokuthi amapuleti e-lithospheric) akhona. Lapho kuqubuka ukungezwani okukhulu phakathi kwabo, uyadedelwa, kanjalo kubangele ukuzamazama komhlaba.
Ukuzamazama komhlaba kungaziguqula kanjani izinto ezinwebeka koqweqwe?
Ukuzamazama komhlaba kungadala abanye amamayela ambalwa kude, kepha manje iqembu eliholwa ngu-Andrew Delorey, waseLos Alamos National Laboratory, noKevin Chao, waseMassachusetts Institute of Technology (MIT) eCambridge, e-United States, nabo bathole ukuthi lapho ukungezwani kubangela ukuthi amaphutha amabili ahambe, amandla akhishwa ngendlela yamagagasi okuzamazama komhlaba.
La magagasi, lapho edlulela kwesinye isifunda esinamaphutha, aguqula ukuqina okuvumela ukuthi uqweqwe lukwazi ukumelana nengcindezi. Ngakho-ke, isimo sengcindezi yesakhiwo naso siyashintsha, okungagcina kudala ukuzamazama komhlaba okusha.
Umhlaba uyiplanethi enamandla kakhulu kunalokho ongase ucabange ekuqaleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukuzamazama komhlaba kuguqula izinto ezinwebeka koqweqwe lomhlaba
Iyiphi indawo enesiphepho emhlabeni?